कोभिड -१ by डचटाउन मुख्य सडकहरु बाट प्रभावित डचटाउन व्यवसायहरु को लागी नयाँ अनुदान
COVID-19 बाट प्रभावित डचटाउन व्यवसायका लागि नयाँ अनुदान
प्रकाशित नोभेम्बर 13th, 2020
सेन्ट लुइसको शहरले COVID-19 बाट प्रभावित स्थानीय व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्न अर्को सानो व्यवसाय अनुदान कोष स्थापना गरेको छ। Funding १.२ million मिलियन कोष बाट कोष मा कार्स ऐन $ 5,000 को अनुदानको रूपमा वितरित गरिनेछ।
सोमबार, नोभेम्बर १th बाट शुरू गर्दै, व्यवसायहरूले अनुदानको लागि आवेदन दिन सक्दछन्। एप्लिकेसनहरू पहिले आओ, पहिलो-सेवाको आधारमा प्रक्रियामा छन्। कोष समाप्त नभएसम्म अनुदान जारी गरिनेछ। सेन्ट लुइस विकास निगम अनुदान प्रशासन गर्नेछ। तपाइँ तपाइँको अनुदान आवेदन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ सोमबार बिहान १० बिहान।
अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस्
आधा कोष अवसर क्षेत्र, वचन क्षेत्र, वा छिमेकी पुनरुद्धार रणनीति क्षेत्र भित्रका व्यवसायहरूका लागि छुट्याइएको छ। अधिकांश ग्रेटर डचटाउन वरपरका क्षेत्रहरू यी तोकिएका क्षेत्रहरू भित्र पर्छन् - डचटाउनको पूर्णता, ग्र्याभोइस पार्क र माउन्ट प्लेजेन्ट यी सबै दक्षिणपूर्वमा समावेश छन्। एनआरएसए.
थप रूपमा २०० अनुदानहरू आतिथ्य व्यवसायका लागि छुट्याइएको छ - रेस्टुरेन्ट, बारहरू, क्याफेहरू, क्याटररहरू, विवाह योजनाकारहरू, र फोटोग्राफरहरू र अन्य। फूड ट्रक अपरेटरहरू पनि लागू गर्न सक्छन् यदि उनीहरूसँग कमिसरी वा शहरमा रहेको अन्य भौतिक ठाउँ छ।
अनुदानको लागि योग्य हुन, व्यवसायहरूले निम्न सबै मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्दछ:
२ or वा कम पूर्ण-समय बराबर कर्मचारीहरू
बन्द छ वा अन्यथा COVID-19 को कारणले प्रभाव पार्दछ
सेन्ट लुइस व्यापार लाइसेन्स को मान्य शहर
सेन्ट लुइस कलेक्टरको राजस्वका सबै भुक्तानीमा हाल राजस्व (सम्पत्ति कर, आय कर, पानी बिल, आदि)
मा अनुदान प्राप्त भएन अनुदानको अन्तिम चरण यस गर्मीमा वितरित
संघीय पेचेक संरक्षण कार्यक्रम (पीपीपी), आर्थिक चोट प्रकोप anण (EIDL), वा अन्य संघीय राहत सुविधाहरू कोष द्वारा पहिले नै भुक्तान गरिएको खर्च कभर गर्न कोष को उपयोग गर्दैन।
रुचिको कुनै द्वन्द छैन, जस्तै सेन्ट लुइसका कुनै कर्मचारीहरूको शहर, निर्वाचित वा नियुक्त अधिकारीहरू, वा तिनीहरूको नजिकको परिवार
सेन्ट लुइस अध्यादेशहरूको प्रति शहर भेदभाव गर्दैन
निम्न प्रकारका व्यवसायहरू अनुदानको लागि आवेदन दिन अयोग्य छन्:
गैर नाफामुखी संगठनहरू, चर्चहरू, वा धार्मिक संगठनहरू
बैंक र अन्य वित्तीय संस्था
लेखा वा सीपीए फर्महरू
कानून फर्म वा वकीलहरू
चिकित्सक, दंत चिकित्सक, सर्जन, optometrists, chiropractors, वा पशुचिकित्सक
बीमा दलाल वा एजेन्टहरू
घर जग्गा दलाल वा एजेन्टहरू
सम्पत्ति व्यवस्थापन सेवाहरू
वास्तुकारहरू, ईन्जिनियरहरू, वा भूमि सर्वेक्षणकर्ताहरू
नर्सिंग होम वा डेकेयर सुविधाहरू
होटल, मोटलहरू, ओछ्यान र ब्रेकफास्टहरू, वा छोटो अवधिमा भाँडा
लागू गर्न तयारी गर्दै
तपाईंको अनुदानको लागि आवेदन दिन तपाईंसँग तपाईंको व्यवसाय इजाजतपत्र नम्बर हुन आवश्यक छ। इजाजत पत्र जून १, २०२० मे 1१, २०२१ को लागि वैध हुनुपर्दछ। अघिल्लो वर्षको इजाजतपत्र नम्बरहरू स्वीकार गरिने छैन। कल गर्नुहोस् (314) 622-4528 वा भ्रमण गर्नुहोस् लाइसेन्स कलेक्टरको वेबसाइट तपाईंको व्यवसाय इजाजतपत्रको स्थिति प्रमाणित गर्न।
यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाइँ राजस्व कलेक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कि तपाइँको आय करहरू, व्यक्तिगत सम्पत्ति, र व्यवसाय सम्पत्ति करहरू पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको छ भनेर प्रमाणित गर्न। कल गर्नुहोस् (314) 622-3291 तपाईंको आय करहरूको स्थिति जाँच गर्न, र कल गर्न (314) 622-4111 तपाइँको सम्पत्ति करहरु भुक्तान गरीएको छ। तपाईं मा अतिरिक्त जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ राजस्व वेबसाइट को कलेक्टर। यदि तपाइँको आवेदन कलेक्टर संग कुनै दोषको कारण अस्वीकृत भयो भने, तपाइँले आवश्यक फाइलिंग र भुक्तानी पछि पुन: आवेदन गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको व्यवसायले प्रयोग गरेको व्यक्तिको संख्या कागजात गर्नको लागि, तपाईं निम्न प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ:
२०१ Federal फेडरल आईआरएस W-2019 फाराम W मजदूरी र कर कथनको ट्रान्समिटल
२०२० का लागि फाराम 941 2020१ — रोजगारदाताको त्रैमासिक संघीय कर फिर्ता (quarter/6०/२०२० वा / / 30०/२०२० अन्त्य हुने त्रैमासिक)
सेन्ट लुइस कलेक्टर राजस्व फार्म W-10 — त्रैमासिक आय कर फिर्ता
लागू गर्न तयार हुनुहुन्छ?
एकचोटि तपाईंले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुभयो र तपाईंको कागजातहरू जम्मा गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो आवेदन सोमबार, नोभेम्बर १th को बिहान १० बजे सुरू गरेर फाइल गर्न सक्नुहुन्छ।
यस पृष्ठमा तपाईंको साथी व्यवसाय मालिकहरूलाई सन्दर्भ दिनुहोस् visit उनीहरूलाई भ्रमण गर्न भन्नुहोस् dutchtownstl.org/grants.
तल दायर गरिएको Covid-19. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार, Covid-19, DT2, र डचटाउन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो नोभेम्बर 13th, 2020 .
DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन Covid-19 COVID-19 बाट प्रभावित डचटाउन व्यवसायका लागि नयाँ अनुदान
डचटाउन मुख्य सडकहरु खोज्नुहोस्
डचटाउन मुख्य सडकहरु मा अधिक